Ilaha Waalidka - Xannaanada Ilmaha San Diego
Ilaha bilaashka ah ee Waalidiinta
In ka badan 40 shabakadood oo waxtar leh si ay kaaga caawiyaan abuurista guri caafimaad qaba ilmahaaga.
Waalidnimadu ma laha
in la qiyaaso shaqo.
Iyadoo in ka badan 40 shabakadood oo waxtar leh ay diyaar yihiin, waxaad baran kartaa sida loo koriyo caruur faraxsan oo caafimaad qaba.
Xasaasiyad imtixaankaing loogu talagalay carruurta(Asthma and Allergy Foundation of America)
Cudurka Neefta ee Carruurta (MEDLINE iyo macluumaadka caafimaadka)
Neefta ee dhallaanka (Asthma iyo Allergy Foundation of America)
Neefta caruurnimada (Asthma iyo Allergy Foundation of America)
Burns (MEDLINE iyo macluumaadka caafimaadka)
Yaraynta Khatarta Shilalka Rogista ee 15-Rakaabka Vans (Maamulka Badbaadada Wadooyinka Wadooyinka Qaranka)
Caafimaadka Carruurta (MEDLINE iyo macluumaadka caafimaadka)
Daryeelka Carruurta Caafimaadka qaba Ameerika
Caymiska Caafimaadka ee la awoodi karo Ilaha macluumaadka bilaashka ah si ay u caawiyaan samaynta go'aamo xog ogaal ah oo ku saabsan caynsanaanta daryeelkooda; sida loo diiwaan geliyo caymiska caafimaadka gobolka, kharashka qorshayaasha, doorashooyinka waayeelka iyo dadka naafada ah, iyo in ka badan.
Caymiska Carruurta Hadda (Caymiska caafimaadka qiimaha jaban ee carruurta)
Albaabada Furitaanka: Tignoolajiyada iyo Ikhtiyaarada Isgaadhsiinta ee Carruurta Maqalku Lumay (Wasaaradda Waxbarashada Mareykanka) Haddii aad dhawaan ogaatay in ilmahaagu qabo lumis maqal, xaashidan kheyraadka leh ee nidaamyada adeegga iyo macluumaadka kooxaha kale waa adiga.
Jadwalka Tallaalka Ilmaha iyo Qaan-gaarka (Akadamiyadda Maraykanka ee Dhakhaatiirta Carruurta) ee lagu taliyay Jadwalka Talaalka ee loogu talagalay dadka da'doodu tahay 0 ilaa 6 sano.
Xasaasiyadda Latex (Maamulka Badbaadada iyo Caafimaadka Shaqada)
Medicine (MEDLINEPlus Information Health)
Mustaqbalka ifaya ee ku dhaqanka: Nafaqada Daabacaadda 2aad Jaamacadda Georgetown
Caafimaadka Ilkaha ee Carruurta (MEDLINE iyo macluumaadka caafimaadka)
Xarunta Kheyraadka Afka ee Hooyada iyo Dhallaanka ee Qaranka Gole ka hadlaya oo ka hadlaya arrimaha caafimaadka afka dadweynaha.
Caafimaadka Afka iyo Barashada: Marka Caafimaadka Afka ee Carruurtu uu Xanuunsado, sidoo kale Awooddooda Waxbarasho ayaa la mid ah (Xarunta Qaranka ee Waxbarashada Hooyada iyo Dhallaanka)
SIDS (Cudurka Dhimashada degdega ah ee Dhallaanka)
Hagaha Waalidka ee Hurdo Badbaado leh (Caafimaadka Child Care America America Back to Sleep Campaign) Yaree khatarta SIDS
Isbahaysiga Shumaca Koowaad/SIDS Guddiga fariinta iyo wararka hadda ee SIDS
Calaamadaha Dhimashada Ilmaha oo kedis ah (MEDLINE iyo macluumaadka caafimaadka)
Ololaha Carruurta Ka Xorta ah Tubaakada
Machadka Badbaadada Koofiyadda Baaskiilka Cilmi-baaris, sharciyo, tirakoobyo, dayactir, warbaahinta, iyo macluumaadka badbaadada koofiyadda ee laga heli karo mareegahan.
Faraxumaynta Ilmaha (MEDLINE iyo macluumaadka caafimaadka)
Xarunta Qaranka ee Xanuunka Ilmaha ee ruxay Websaydhku wuxuu bixiyaa macluumaad, fikrado iyo jawaabo waalidiinta iyo daryeelayaasha ku dhibtoonaya inay la qabsadaan ilmaha ooyaya oo aan ka niyad jabin inay si xun u ruxaan ilmaha.
Heerarka Bulshada Maraykanka ee Imtixaanka iyo Qalabka Madal furan oo loogu talagalay horumarinta heerar caalami ah oo tayo sare leh, suuqa la xiriira oo laga isticmaalo adduunka oo dhan.
Badbaadada Ilmaha (MEDLINE iyo macluumaadka caafimaadka)
Komishanka Badbaadada Cuntada
Safe Kids Worldwide Waxaa ku jira warbixino faahfaahsan oo ku saabsan ka hortagga dhaawaca ilmaha.
Safetylit.org: Ilaha khadka tooska ah ee suugaanta ka hortagga dhaawaca (San Diego State Univ. Graduate School of Public Health)
Badbaadada garoonka ciyaarta
Barnaamijka Qaranka ee Badbaadada Garoonka Ciyaaraha
Xannaanada Carruurta (MEDLINE iyo macluumaadka caafimaadka)
Xarunta Sharciga Xannaanada Carruurta Shabakaddan waxa ay u dooddaa carruurta, qoysaska iyo bulshooyinka ay wajahaan caqabadaha xagga daryeelka carruurta oo tayadoodu sarrayso.
Ururka Qaran ee Daryeelka Carruurta Qoyska
Ururka Qaranka ee Daryeelka Carruurta
Eber ilaa Saddex (macluumaad horumarineed oo ku saabsan dhallaanka ilaa socod baradka)
Carruurta qabta xanuunka Macaanka
Carruurta qabta xanuunka Macaanka Bulshada khadka tooska ah ee carruurta, qoysaska iyo dadka waaweyn ee qaba sonkorowga.
Xarunta Qaranka ee cilladaha dhalashada iyo naafannimada koritaanka
Xarunta Qaranka ee cilladaha dhalashada iyo naafannimada koritaanka Mareegahaan ayaa tilmaamaya sababaha iyo ka hortagga cilladaha dhalashada iyo naafanimada korriinka.
Caafimaadka Maskaxda / Bulshada / Dareenka
Mustaqbalka ifaya ee ku-dhaqanka: Caafimaadka Maskaxda - Qalabka Qoysaska.
Qaladaadka Dhaqanka Ilmaha (MEDLINE iyo macluumaadka caafimaadka)
Daraasada Iskaashatada Xannaanada Ilmaha/Bilowga Madaxa: Warbixinta Ugu Danbaysa (Xarunta Horumarinta Waxbarashada, Inc.) Warbixintan waxaa soo saaray cilmi-baarayaal ka tirsan Xarunta Carruurta & Qoysaska si ay wax uga bartaan dabeecadda daryeelka hore iyo iskaashiga waxbarashada iyo saamaynta ay ku leeyihiin tayada iyo helitaanka adeegyada.
Xannaanada Ilmaha ee Da'da Dugsiga
Tilmaamaha Waxbarashada Hore Tilmaamaha Waxbarashada Hore waxay bixiyaan qaab-dhismeedka isticmaalka waxa aan hadda ognahay ee ku saabsan muhiimada sannadaha hore si loo taageero guusha dugsiga dambe.
Caafimaadka Hooyada, Dhalmada Kadib
Barnaamijka Cilmi-baarista Xafiiska Caafimaadka Hooyada iyo Dhallaanka Cilmi baaris ku saabsan siyaabaha lagu hagaajin karo caafimaadka hooyada, carruurta iyo dhalinyarada.
Caafimaadka Maskaxda & Kooxaha Taageerada
La soo saaray markaas Isbahaysiga Hidaha tusaha kooxaha taageerada waalidka by congential syndrome.
Tusaha Dhallinta ee Caafimaadka Maskaxda (Lambarada teleefoonka ee la wacayo) iyo 5 Talooyin Fayoobi oo loogu talagalay Dhallinta – Xafiiska Waxbarashada Degmada San Diego